Denis Juru, president International Cross Border Traders Association
Vanorarama nekutenga nekutengesa vari kuyambirwa kuti varuke mazano anoita kuti vakwanise kuwana mari munyika kana kuuya nemazano ekuti vangaderedza seyi mari dzekutakurisa zvinhu zvavanotenga munyika dzakapoteredza Zimbabwe idzo dziri kukwidza mitero yezvinhu zvavanotenga munyika idzi.
Kubva musi wa1 Kubvumbi gore rino, Botswana iri kutarisirwa kukwidza mutero unobhadharwa nevatengi kana kuti value added tax kubva pazvikamu gumi nezviviri kubva muzana kuenda pazvikamu gumi nezvina kubva muzana, ukuwo South Africa iri kutarisirwa kukwidza mafuta edzimota nemimwe mitero.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi uye vari mukuru mukambani yeBotswana Insurance Company Limited, VaNewton Jazire, vaudza Studio7 kuti kukwidzwa kwemitero kuchaita kuti vanotenga nekutengesa vave panguva yakaoma.
VaJazire vayambira vanotenga nekutengesa kuti vatsvage zvimwe zvavangaita munyika pane kunohodha kunana Botswana, South Africa, Namibia, Mozambique kana Zambia.
Nokuda kwekusamira zvakanaka kwehupfumi munyika, zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvorarama nekutenga nekutengesa midziyo inobva kune dzimwe nyika senzira yekuzviraramisa.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VaSamuel Wadzai, vati kukwidzwa kwemitero uku kuchagadza vatengi nevatenges pasi.
VaWadzai vati sangano ravo riri mubishi kutaurirarna nehurumende dzenyika dziri mudunhu riri kuchamhembe kweAfrica kuti varerutsire nhengo dzavo mitero
Mutungamiri wesangano reInternational Cross-Border Traders’ Association, VaDennis Juru, vatiwo yasvika nguva yekuti vanotenga nekutengesa vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru nokuti chara chimwe hachitswanyi inda.
Gwaro rakaburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat svondo rakapera rinoratidza kuti inflation yakawedzera kubva pazvikamu zvina zvine zviga makumi maviri nezviiri kubva muzana muna Zvita wegore rapera kusvika pazvikamu zvishanu nezviga makumi mana nezvishanu kubva muna Ndira wegore rino.